Kaddib Hakim Ziyech, Chelsea oo ku dhow inay la saxiixato xiddig kale ee ka tirsan kooxda Ajax – Gool FM
(London) 11 Agoosto 2020. Shabakada “Sky Sports” ayaa shaacisay in maamulka kooxda Chelsea ay doonayaan inay la soo saxiixdaan xiddig kale ee ka tirsan naadiga Ajax, kaddib markii ay dhameystireen heshiiska laacibka reer Morocco ee Hakim Ziyech.
Kooxda reer England ee Chelsea ayaa ku dhawaaqday inay la soo saxiixatay xiddiga naadiga Ajax ee Hakim Ziyech xagaagaan, wuxuu u saxiixay qandaraas 5 sano ah, kaddib heshiis ku kacaya 45 million euros.
Hadana maamulka kooxda Chelsea ayaa qorsheynaya inay la soo wareegaan ciyaaryahan kale ee ka tirsan naadiga Ajax si ay ugu xoojiyaan safka kooxdooda ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub ee 2020/2021.
Shabakada “Sky Sports” ayaa xustay in daafaca dambeedka bidix ee reer Argentina iyo kooxda Ajax ee Nicolás Tagliafico uu xiiso ka helayo maamulka Chelsea, kaddib markii tababare Frank Lampard uu codsaday adeegiisa.
Shabakada ayaa intaa ku dartay in labada kooxood ee Chelsea iyo Ajax la qorsheenayo inay gaaraan heshiis la xiriira in Nicolás Tagliafico uu ku biro garoonka Stamford Bridge ee dhaca galbeedka magaalada London.
Waxaa xusid mudan, in heshiiska haatan Nicolás Tagliafico ee kooxda Ajax uu dhacayo xagaaga 2022, wuxuuna xilli ciyaareedkan ciyaaray 38 kulan, isagoo dhaliyay 5 gool, wuxuuna caawiyay 7 gool kale.